OMN: Kabaja Ayyaana Id Alfaxiir 1440 Istaadiyoomi Finfinnee irraa – Kichuu
HomeAfaan OromooTVOMN: Kabaja Ayyaana Id Alfaxiir 1440 Istaadiyoomi Finfinnee irraa
OMN: Kabaja Ayyaana Id Alfaxiir 1440 Istaadiyoomi Finfinnee irraa
ኢ/ር ታከለ ኡማ በአዲስ አበባ ስታዲየም በተከበረው የኢድ አልፈጥር በዓል ላይ ያስተላለፉት መልዕክት
‘Gammachuun Iid-Alfaxiir baranaa adda’
(bbcafaanoromoo)—-Ayyaanni Iidal Faxiir 1, 440’n Istaadiyoom Finfinneetti bakka hordoftootni amantichaa hedduuniifi keessummoonnii affeerraan taasifameef argamanitti ganamaa qabee kabajamaa jira.
Preezidantiin Mana Maree Islaamummaa Itoophiyaa Muftii Haji Umaar Idriis ergaa dabarsaaniin gammachuun ayyaana kanaa waggaa waggaan deebi’e kan dhufu ta’uus ayyaanni bara kanaa gammachuu addaa qaba jedhaniiru.
Wanti gammachuu alaanaa adda godhu tokkummaanfi nageenyi haawaasa musliimaa guutuu ta’uudha jedhaniiru. Tokkummaa fi nageenya hawaasa musliimaa deebisuuf gahee Ministirri muummee Itoophiyaa bahaniifis galateefataniiru.
Hariiroo hawaasa musiliimaa fi mootummaa, maaltu jijjiirame?
Ayyaanni Iidii baranaa ‘addadha’
Loltuu ABO irraa hanga barsiisaa amantaa – Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa
Seenaa keessatti haala rawwate hin beekneen Ministirri Muummeefi hooggantootni kaaniis sirna Ifxaar qopheessuun hordoftoota Amantichaa affeeruus dinqisiifannaan yaadataniiru.
Miirri tokkummaafi nageenyaa Iida baraanaarratti mul’ate akka fuldurattiis fufu abdii akka qaban ammoo Kantiibaa Ittiaanaa magaalaa Finfinnee Injinaar Taakkalaa Uumaatu dubbate.
Ayyaanni kun magaalota biyyattii biroo keessattis miira gammachuu guddaan kabajamaa jira.
Ayyaannii kun Itoophiyaa dabalatee biyyoota Afrikaa akka Yugandaa, Somaaliyaa, Seraaliyoon Ripaablika Dimookraatawaa Kongoofi Maalii fa’a keessatti kabajamaa jira.
Biyyoota akka Keeniyaafi kaan keessatti ammoo ayyaanich ifatti guyyaa boruu kabajama. Haata’u malee hordoftootni Amantaa Islaamaa Keeniyaa sagada addaa raawwachuun ayyanicha har’uma kabajaniiru.
Barsiisaan Amantii Islaamaa beekamaan lammii Zimbaabwee Muftii Ismaa’eel Meenk ergaa twiitara irratti gadhiisaniin guyyaa kamirrattuu Iida kabajaa, ayyaana gaarii isiniif haata’u jedhaniiru.
Guyyaa kanatti namoota rakkoo keessa jiraniifi gargaarsa fedhaniif kadhachaa gargaarsa maluus akka kennan hawaasa musliimaaf dhaamaniiru.
Tokkummaan cimaa dhufeera
Finfinneetti Pireezdaantiin Mana Maree Dhimma Islaamummaa Hajii Abdulaaziiz Wabuun, tokkummaan amantichaa hoggansi haaraan taayitaatti erga dhufee cimaa jiraachuu ibsaniiru.
“Tokkummaa argame kana ammoo cimsuuf hojiin bal’aan kan hojjetamu qabudha.”
Hajii Abdulaaziiz hojii tola-ooltummaafi qulqullinaa magaalaa Finfinnee keessatti hawaasni Musliimaa qoodasaa akka ba’atus dhaamaniiru.
Ayyaana Iid Alfaxir 1440 kana irratti aanga’oonni ergaa baga ittiin isin ga’ee dabarsaniiru. Ministirri muummee Dooktar Abiy Ahimad, itti aanaan pireezdaantii naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa, hoggansi naannoleefi dhaabbilee adda addaa warraa ergaa hawwaasa Musliimaf dabarsan keessaati.
Dooktar Abiy hordoftoota amantaa Islaamaatiin baga hiikkaa sooma Ramadaanaa Hijraa 1440ffaa; Ayyaana Iid Al Faxiiriin ittiinisin ga’e jedhaniiru.
Ityoophiyaanonni dallaa addaan isaan fageessu walirratti ijaarurra amantaa isaanii dhuunfaa dhuunfaan qabachuudhan tokkummaafi waliin ta’uun uummata cee’ee as ga’edha jedhaniiru muummee ministiraa Dooktar Abiy Ahimad ergaa isaanitiin.
Ammas rakkoolee mudatan walooman cee’uuf waltumsaan waliin hojjechuun murteessadha jedhan muummee ministiraa Dooktar Abiy Ahimad.
Hordoftoonni amantaa Islaamaa ati eenyu, eessaa dhufte osoo waliin hin jedhin waliin akka dhaabbatu akkuma barbaannu, ummanni Ityoophiyaas tokkummaafi jaalalaan guddinaafi jabina biyyaatiif akka walooman dhaabbatu ni barbaanna jedhaniiru.
WAAJIRA KANTIIBAA MAGAALAA FINFINNEE
Walitti bu’iinsi, buqqaatiin, rakkoon siyaasaafi diinagdee akkuma baatii sooma Ramadaanaa guyyaa isaanii lakkaa’anii ni xumuramu.
Sanaan booda Ityoophiyaa bara gammachuu akka ayyaana Iidaatu ishee eeggata jedhan.
Soomanni Ramadaanaa cimaa ta’us, yoo xumuramu yaadannoo isaatin jabinatu baratama.
Rakkoo Ityoophiyaan keessa jirtu yoo dabarru, bara gammachuu walootti gaafa ceenu, qormaanni marti yaadannoo ta’a jedhan.
Itti-aanaan Kantiibaa Magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalaas, Ayyaanni Iid Alfaxir 1440ffaan jaalalaafi tokkummaan kan itti calaqqisudha jedhaniru.
Kanaan dura garaagarteedhan bakka addaddaatti salaatan ayyaanicha kabajaa turtaniittu, kana booda garuu akka baranaatti tokkummaadhan kabajama jedhan.
Ayyaanni baranaa tokkummaan hordoftoota amantaa Islaamaa kan daran itti cimeefi waliin kabajamedhas jedhan.
Hojii tola ooltummaa magaalaa Finfinneetti ganna hojjetamurratti hordoftoonni amantaa Islaamaa akka hirmaatan Injiinar Taakkalaan waamicha dhiyeessaniiru.
Qophiin jala bultii Ayyaanni Iid Alfaxir kaleessa guyyaa guutuun bakka sagada Jamaa qulqulleessuutiin eegalameera.
Ministiri Muummee Dr. Abiy Ahimadiifi Kantiibaa Itti-aanaa Magaalaa Finfinnee Injinar Takkalaa Uumaa dabalatee aanga’oonni ol-aanoo naannoo Istaadiyeemii Finfinnee qulqulleessaa oolan.
Akka odeeffannoo fuula Feesbuukii Waajira Ministeera Muummee irraa argannetti namoonni 2,000 ta’an naannoo Solaata Istaadiyeemii Finfinne kana irratti hirmaataniiru.
Kabajaa Iid Alfaxir kanaaf qophii taasifamuuf Bulchiinsi Magaalaa Finfinnee ammoo awutoobusoota 800 namoota solaata Jamaaf deeman deddeebisuuf ramaduu isaa beeksisee ture.Qophii jala-bultii
Kabajaa Iid Alfaxir kanaaf qophii taasifamuuf Bulchiinsi Magaalaa Finfinnee ammoo awutoobusoota 800 namoota solaata Jamaaf deeman deddeebisuuf ramaduu isaa beeksisee ture.
“Kamiseen salataa Iida booda akkaaitti tokkummaa isaa ibsate.”
የቦርዱ ሰብሳቢ ክብርት ብርቱካን ሚደቅሳ “በአገራችን የተለያዩ ምርጫዎች ተካሂደዋል።
“Falmaa Oromoo Hubachuu DHabuun Rakkoo Naannichaa Daran